I-Cetilistat powder eluhlaza okwehliswa kwesisindo; AASraw steroid powder
/Blog/cetilistat/I-Cetilistat powder eluhlaza okwehliswa kwesisindo
ezaposwa ngomhla 11 / 26 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo cetilistat. Ibe 2 Comments.
Yintoni le Cetilistat / Cetilistat powder eluhlaza?
I-Cetilistat powder eluhlaza / i-Cetilistat izinto eziluhlaza sisiyobisi esenzelwe ukunyanga ukutyeba. Isebenza ngendlela efanayo nesiyobisi esidala se-orlistat powder ngokuthintela i-lipancreatic lipase, i-enzyme eyaphula i-triglycerides emathunjini. Ngaphandle kwale enzyme, i-triglycerides evela ekutyeni ithintelwe ekubeni i-hydrolyzed ibe ngama-acid asimahla anokutsalwa kwaye akhutshelwa ngaphandle. Kwezilingo zabantu, letilistat powder yaboniswa ukuba ivelise ukulahleka kwesisindo esifanayo kwi-orlistat. Iziphumo zokulahleka kobunzima kwaye zithatha amanqatha ekudleni. Iyeza lisebenza ngokungqameneyo ukunciphisa ukutya, ngaphandle kokuchaphazela ingqondo.
igama Cetilistat, Cetilistat powder, Cetilistat powder eluhlaza
I-Molecular Formula C25H39NO3
Isisindo somzimba 401.58
Indawo yokunyibilika 72-76 ℃
Temp yoGcino. 2-8 ℃
Umbala I-White okanye i-powder emhlophe
I-Cetilistat effect effect eluhlaza / I-Cetilistat effect
Ukugqithisa isifo sesimanje kumazwe asakhulayo kunye namazwe asakhulayo, kwaye ngoku ngokukhululeka nokugqithisela kunobangela ukufa kwabantu emhlabeni wonke kunokuba ngaphantsi komzimba. Cetilistat powder kuthathwa njenge-lipase inhibitor uhlobo lweyeza. Amachiza asebenza ngokuthintela ukuxiliswa kwamanqatha ngaphakathi kokutya ukuze ungayigcini kwaye amanqatha angapheliyo aya kudluliselwa emzimbeni kwintlungu. Iifomsules kufuneka zisetyenziswe kunye nekhalori ephantsi, ukutya okunamafutha aphantsi kunye neprogram efanelekileyo yokunyamezela. Ukunciphisa ukondla kweekhalori kunye nokunyuswa kwesisindo kunokunceda ukukhusela nokunyanga iimeko ezifana ne-cholesterol ephezulu, isifo sikashukela, isifo soxinzelelo kunye nesifo senhliziyo.
I-Cetilistat i-powder eluhlaza / i-Cetilistat dosage
Cetilistat powder ifika kwifomsule ifom kunye nomxholo weyeza ngamnye yi-60mg. Yiya kukubona ugqirha ngaphambi kokusebenzisa le mayeza ukuze ufumane iingcebiso ngokulawulwa kwisisindo kwaye ukwenzela ukuba i-dose efanelekileyo ibalwe. Iifomsile zithathwa ngomlomo kwaye ziginyiweyo ngokupheleleyo ngeglasi yamanzi. Ngokuqhelekileyo izigulane zixelelwe ukuba zithathe kunye nesidlo ukuze zikhusele nayiphi na ifayibhile ekudliwayo. Kuzo zonke iziganeko, izigulane mazihambelane ngokuthe ngqo kwiirimenti zerayini zinikezelwa ngugqirha wazo kwaye ziqinisekise ukuba i-dose ephezulu ayidluli njengoko ukwenza njalo kunokwandisa umngcipheko wemiphumo emibi.
I-Cetilistat yecala eliphambili le powder effect / iCettilist effect effect
Ukuba i-Cetilistat powder eluhlaza iyakuthi ithathwe, ingabangela ukuba umphumo othile wecala ube ngolu hlobo:
I-Cetilistat ingxube eluhlaza / isilumkiso seCetilistat
I-Cetilistat powder eluhlaza ingathintela ukuxutywa kwamavithamini athile anelisayo kunye nezinye iintlobo zezondlo.
Ukutya ukutya okuninzi nge-fat content kungakhuphula umngcipheko weempembelelo.
Ingcaciso engakumbi ngemveliso echaphazelekayo,wamkele ukucofa apha.
Imibuzo ye-8 ukuzibuza ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder
Ukwakhiwa komzimba weHGH: Indlela yokuthatha kunye nokuxuba iHGH?	Ngaba abafazi banokuthatha i-Primobolan (i-Methenolone Acetate)?